कपिलवस्तु र रुपन्देहीमा २ वर्षीय बालकसहित थपिए १३ संक्रमित – Khabar Silo
कपिलवस्तु र रुपन्देहीमा बुधवार थप १३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
प्रदेश जनस्वास्थ्य कोरोना प्रयोगशाला रुपन्देहीमा गरिएको परिक्षणमा कपिलवस्तुका १२ जना र रुपन्देहीका १ गरी १३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो।
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालका निमित्त प्रमुख डा. राजेन्द्र गिरीका अनुसार रुपन्देहीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेमा गत वैशाख ३१ गते भारतको सुनौलीस्थित क्वारेन्टाइनबाट ल्याइएका पुरूष छन्।
गिरीले सुनौलीस्थित भारतीय क्वारेन्टाइनबाट सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको लिलाराम मावि भैरहवाको क्वारेन्टाइनमा राखिएका पुरूषमा कोरोना पुष्टि भएको जानकारी दिए।
त्यस्तै, कपिलवस्तुका १२ जनामध्ये ९ जना महाराजगञ्ज नगरपालिकाका छन् भने ३ जना विजयनगर गाउँपालिकाका छन्।
कपिलवस्तुका कोरोना फोकल पर्सन कुमार थापाले संक्रमितमध्ये २ वर्षीय बालकसँगै ५ जना बालबालिका रहेका छन्।
महाराजगञ्ज नगरपालिकाका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा रहेका २ वर्षीय र १४ वर्षीय बालकसँगै ३, ४ र ५ वर्षीय तीन बालिकामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको थापाले जानकारी दिए।
संक्रमण देखिने अन्यमा २०, २८ र १६ वर्षीया महिला तथा २०, २२, ३५ र ४० वर्षीया पुरूष छन् ।
महाराजगञ्जमा संक्रमण पुष्टि हुने सबै ९ जना नै नगरपालिकाको वडा नं. ९ सिसवाका हुन्।
उनीहरू सबै भारतका विभिन्न स्थानबाट आई क्वारेन्टाइनमा बसेको खुलेको छ।
योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ४ सय २० पुगेको छ भने ४५ जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्।
भारत सरकारले नेपाललाई कोरोना परीक्षणका लागि ३० हजार थान पिसिआर किट दिएको छ। नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले स्थास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई आइतबार पिसिआर किट र स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरे। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार भारतले उक्त स्वास्थ्य सामग्री स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको हो। उनले स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएकोमा भारत सरकारलाई धन्यवाद […]